CABSI: Xidhiidhka Kubbada Cagta Senegal Oo Cadeeyay In Sadio Mane Lagu Soo Celiyay Liverpool Iyo Dhaawicii Uu Muddada La Maqnaa Oo Dib Ugu Soo Kacay. – WWW.Gool24.net
CABSI: Xidhiidhka Kubbada Cagta Senegal Oo Cadeeyay In Sadio Mane Lagu Soo Celiyay Liverpool Iyo Dhaawicii Uu Muddada La Maqnaa Oo Dib Ugu Soo Kacay.
Xidhiidhka kubbada cagta Senegal ayaa si rasmi ah u xaqiijiyay in Sadio Mane aanu ciyaari doonin kulanka aan micnaha lahayn ee South Africa iyo Senegal dhex mari doona kadib markii uu Sadio Mane door wayn ku soo yeeshay in uu qarankiisa u soo saaro koobka aduunka kulankii maalintii jimcihii ka dhacay South Afrika. Laakiin walwal cusub ayaa soo foodsaaray Klopp iyo jamaahiirta kooxdiisa Reds kadib markii uu xidhiidhka kubbada cagta Senegal cadeeyay in Mane uu xanuun ka dareemay muruqii uu dhaawacu hore uga soo gaadhay.
Sadio Mane ayaa Liverpool ka maqnaa kulamo badan oo ahayd muddadii u dhexaysay labadii xili kulamo caalami laakiin waxa uu si lama filaan ah garoomada ugu soo laabtay kulankii ugu danbeeyay ee West Ham halkaas oo uu ku muujiyay muhiimada uu kooxda Klopp ku leeyahay.
Markii Sadio Mane looga yeedhay xulka qarankiisa Senegal si uu koobka aduunka ee Russia 2018 ugu soo saaro may jirin sabab ay Liverpool u diidi kartay maadaama oo uu iyagaba ka soo caawiyay in ay 4-1 ku soo garaaceen West Ham laakiin Jurgen Klopp ayaa go’aan ku gaadhay in Sadio Mane uu raaciyo dhakhtarka kooxdiisa ee Scott McAuley kaas oo uu doonayay in uu xaaladiisa si dhaw ula socdo isla markaana uu duugis murqaha u sameeyo haddii ay baahi timaado.
Laakiin xidhiidhka kubbada cagta Senegal ayaa cadeeyay in shaqaalaha caafimaadka xulka qaranka Senegal iyo shaqaalaha caafimaadka Liverpool ay si laba dhinac ah ugu heshiiyeen in Sadio Mane aanu ciyaarin kulanka Senegal ka dhigi doona ee ay wada yeelan doonaan South Afrika kaas oo ka tirsan isreeb reebka koobka aduunka balse aan natiijo ahaan wax saamayn ah yeelan doonin.
Dkhatarka Liverpool ee Scott McAuley oo Sadio Mane ula safray dalkiisa Senegal ayaa door wayn ka qaatay in Sadio Mane aanu halis kale sii galin laakiin haddaba waxaa jira walwal ah in Mane uu dareemayo xanuun ka haysta muruqii uu dhaawucu ka soo gaadhay ee uu muddada la maqnaa kadib markii uu jimcihii u saftay qarankiisa Senegal ee kulankii ay koobka aduunka ugu soo baxeen.
Qoraal ka soo baxay xidhiidhka kubbada cagta Senegal ee Senegalese Football Association oo looga hadlay xaalada Mane ayaa lagu yidhi: ” Kadib kulankii jimcihii ee South Afrika iyo Senegal ee November 10,2017 ka dhacay Polokwane, ciyaartoyga Sadio Mane waxa uu wax yar dareemay dhaawicii hore. Kadib wada tashi dhex maray shaqalaha caafimaadka kooxda qaranka Senegal iyo Liverpool, waxaa si laba dhinac ah loogu heshiiyay in kooxdiisa uu diyaar u noqdo sii daawaynta u sii wato ilaa inta uu si buuxda u soo kabsanayo”.
In Sadio Mane uu dareemay xanuunka dhaawicii uu sida deg dega ah uga soo laabtay ayaa shaki wayn galinaysa in uu taam buuxa u noqon doono kulanka ay kooxdiisa Liverpool soo dhawayn doonto kooxdisii hore ee Southampton oo aanu wali hal kulan kaga hor iman Reds maadaama oo uu sababo kala duwan ku seegay kulamadii ay xili ciyaareedkii hore soo wada ciyaareen.
Jamaahiirta Liverpool ayaa ka war sugi doona ilaa inta uu Jurgen Klopp si buuxda uga warbixin doono xaalada cusub ee ka soo baxday Sadio Mane haddii ayna kooxda Liverpool warbixin caafimaad ka soo saarin kadib baadhitaano lagu samayn doono 25 sano jirkan saamaynta badan balse waxa uu dib ugu soo laabtay Liverpool si qiimayn loogu sameeyo isla markaana uu daawayn u sii qaato.